Dhageyso: RW Khayre oo sifo Cajiib ah ku sheegay sababta uu MD Farmaajo uga maqnaaday furitaanka Aqalka Sare. | XAL DOON
Home NEWS Dhageyso: RW Khayre oo sifo Cajiib ah ku sheegay sababta uu MD...
Dhageyso: RW Khayre oo sifo Cajiib ah ku sheegay sababta uu MD Farmaajo uga maqnaaday furitaanka Aqalka Sare.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, ayaa ka hadlay sababta rasmiga ah ee ka danbeysa inuu furo kalfadhiga 5-aad ee Aqalka Sare, xili uu Muqdisho joogo madaxweynaha dalka Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo).
Sida Dastuurka uu qabo madaxweyne Farmaajo ayaa sharci ahaan iska leh furiraanka Kalfadhiga, iyadoo hadii uu ka baaqsadana ay tahay in Gudoomiyaha Aqalka Sare C/ Xaashi C/llaahi uu qaato Kalmada furitaanka, balse taasi ma dhicin.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo khudbad u jeedinayay Senatorada ayaa sheegay in madaxweynaha uu u soo wakiishay inuu furo Kalfadhigan 5-aad, wuxuuna maqnaanshaha madaxweynaha ku tilmaamay iney tahay mid deg deg ah oo dhinaca amniga ku saabsan.
Mr. Khayre ayaa Xildhibaanada faray iney wanaajiyaan Hay’ada Sharci dejinta ama Aqalka Hoose oo ay ku jiraan in badan oo kamid ah Golihiisa Wasiirada, isagoo sifeeyay in hadii la isla shaqeeyo uu dalka horumar gaarayo.
Si kastaba, Buuq badan ayaa ka dhashay hanaanka uu Ra’iisul Wasaaraha u marayo inuu furo Kalfadhiga 5-aad, iyadoo wax ku dhow laba Saacadood ay taagneyd dood dhinaca Sharciga ah oo la xiriirta awooda uu u leeyahay Wasiirka Koowaad inuu furo Baarlamaanka, waloow markii danbe dalabka Khayre la qaatay.
Halkan Hoose ka dhageyso hadalka RW Khayre: